About Us - Zhejiang Yuking Technology Co., Ltd
Zhejiang Yuking Technology Co., Ltd. i mveliso echubekileyo kumazwe echaphazelekayo uyilo, uphuhliso kunye nokuveliswa Auto Air ongenisa isiguquli, yaye ezinye ezinxulumene Auto A / C Iintetho. Zonke iimveliso zethu ukuthobela nemigangatho kwemigangatho amazwe ngamazwe kwaye baziswa kakhulu ezahlukeneyo kweemalike ehlabathini lonke.
izibonelelo zethu kakuhle ngokwaneleyo kunye nolawulo Obusemagqabini ubunjani kuwo onke amanqanaba imveliso kusenza ukuba isiqinisekiso ulwaneliseko lwabathengi iyonke. Sixhasa ezizinzileyo kunye ezahlukeneyo Auto A / C isiguquli kunye namalungu Auto A / C ngentliziyo yethu yonke. Ngenxa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo yabathengi obalaseleyo, imveliso yethu sele siyithumele Intshona Melika, Umzantsi Melika, South-East Asia, kuMbindi-Mpuma kunye namanye amazwe enxulumene.
Senza ligxininisa "Zintle Quality, ngokunyanisekileyo Trust, kunye neNkonzo Egqibeleleyo". Yiba nexhala umthengi ukuba nexhala, wacinga ingcinga umthengi lowo, ukunceda imfuneko umthengi lowo. Siya kumnika ntoni na ihlabathi lwezoqoqosho kubathengi. Ozithobileyo ebheka phambili ukuba kukho intsebenziswano lwexesha elide kunye nophuhliso kunye bonke abaxumi. Wamkelekile naziphi na abahlobo ukuba uqhagamshelane nathi!